R/W Kheyre oo laamaha amaanka faray in ay soo qabqabtaan dadka wax tahriibiya. – Hornafrik Media Network
R/W Kheyre oo laamaha amaanka faray in ay soo qabqabtaan dadka wax tahriibiya.
Hornafrik-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caawa kulan Afur iyo soo dhaweyn ah la qaatay dhallinyaro Soomaaliyedd oo maxaabiis ku ahaa dalka Liibiya, kuwaas oo dib ugu soo laabtay dalkooda ka dib markii ay u fududaysay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan Ergayga arrimaha qaxootiga u qaabilsan Xafiika Ra’iisul Wasaaraha iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya Tripoli.
waxaa uu amar ku siiyay laamaha amniga in ay xeraan dadka ka shaqeeya tahriibinta si loga hortago in dalka ay ka baxaan dhalinyarada Soomaliyeed.
Taliska Militariga oo amaro ka soo saaray isku dhacyada ciidamada ee Muqdisho.
Shirka Amniga qaranka oo maanta ka furmaya magaalada Baydhaba.